Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်ရန်မှ ကာကွယ်ဖို့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အား ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြပါစို့
ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်ရန်မှ ကာကွယ်ဖို့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အား ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြပါစို့
Kyaw H. Aung's Facebook
လာမည့် ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ စတုတ္ထမြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးများကို ပြန်လည်စတင်တော့မည် ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ဖြစ်သော အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်များတွင် ပြုလုပ်မည့် အဆိုပါအစည်းအဝေးများတွင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ရခိုင်ပဋိပက္ခကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေး၊ ကျိုးပေါက်နေသော အနောက်ဘက် နိုင်ငံ့နယ်စပ်များ လုံခြုံရေး၊ ဘင်္ဂလီနှင့် ရခိုင်ဒုက္ခသည်များ စသည့်ကိစ္စအထွေထွေကို ဆွေးနွေးကြမည်ဟု ကြားသိရသည်။ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကြီးသည် ကျခဲ့ရသော ပြည်သူများ၏ အသက်သွေးများ၊ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော စည်းစိမ်ဥစ္စာများ၊ အကြောက်တရားများဖုံးလွှမ်းကာ မစားနိုင် မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေကြရရှာသော လက်ရှိပြည်သူများနှင့် စစ်မဖြစ်ပဲ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတော့မည့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော စသည့် နယ်နိမိတ်များကို ကာကွယ်ရန် တိကျခိုင်မာပြတ်သားသော မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများ ချမှတ်အတည်ပြု၍ လုပ်ဆောင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အဖြစ်အပျက်များကို သင်ခန်းစာယူ၍ နောင်ဤကဲ့သို့ မဖြစ်ရအောင် ရေရှည်လုံခြုံရေး အစီအမံများ၊ တာဝန်ပေးမှုများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ချမှတ်၍ စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်သွားရမည် ဖြစ်သည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ဖြစ်ပွားသောအခါ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်သည် အကြမ်းဖက်သမားများရန်မှ ကာကွယ်ရန်၊ နောက်နောင်အကြမ်းဖက်မှုများ အမေရိကန်မြေပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားခြင်းမျိုး မရှိရအောင် Patriot Act ကို အလျင်အမြန်အတည်ပြု၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ယခုအချိန်အထိ စက်တင်ဘာ ၁၁ ကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်မျိုး ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ မိမိနယ်နိမိတ်ကို ခုခံကာကွယ်သည့် defensive measure များ ချမှတ်ခဲ့သလို အကြမ်းဖက်သမားများရှိရာသို့ သွားရောက်တိုက်ခိုက်သော pre-emptive attacks များလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများသို့လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာများအပ်နှင်းကာ ဖြစ်လာမည့် အန္တရာယ်များကို အချိန်မီ ထိထိရောက်ရောက် လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပေသည်။ နိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို အကြီးအကျယ်ထိခိုက်စော်ကားသော အဖြစ်အပျက်နှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါ ခါတိုင်း နှစ်ခြမ်းကွဲနေသော Democrats နှင့် Republicans အမတ်များသည် လက်ချင်းဆက်ကာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်၍ Patriot Act ဆိုသည့် မျိုးချစ်ဥပဒေ ကြီးကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်မှ အမတ်မင်းများသည် မိမိနိုင်ငံသားများအား တိုင်းတပါးမှ လာရောက်နေထိုင်သူများက စုပေါင်းစော်ကားသည့် ဤရခိုင်အရေးအခင်းကိစ္စတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားနှင့် ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကို မောင်နှမများကို စုပေါင်းကာကွယ်ကြရမည့် အချိန်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ကြောက်မက်ဖွယ်ရခိုင်အရေးအခင်းများ နောက်ထပ်မဖြစ်ပွားစေရန် အဆိုပါအမတ်မင်းများနှင့် အာဏာရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား ထိထိရောက်ရောက် အစီအမံများပြုလုပ်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းပေးကြစေလိုသည်။ သက်ဆိုင်ရာမိမိရပ်ရွာကိုယ်စားပြု အမတ်မင်းများအား ဖုန်းဆက်၍သော်လည်းကောင်း၊ သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍သော်လည်းကောင်း တတ်အားသမျှ ကူညီတိုက်တွန်းပေးကြစေလိုသည်။ နီးစပ်ရာမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကိုလည်း တိုက်တွန်းပေးကြစေလိုသည်။
ဒီဖေ့ဘုတ်ကနေလည်း မျှဝေပေးကြပါ။ ဘင်္ဂလီရန်မှ ကာကွယ်ဖို့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အား ၀ိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းကြပါစို့။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အင်အားအချိုးအစား (ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်)
၁။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (Union Solidarity and Development Party) (၂၅၉၊ ၁၂၉)
၂။ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်(၁၁၀၊ ၅၆)
၃။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Shan Nationals Democratic Party) (၁၈၊ ၃)
၄။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ (National Unity Party) (၁၂၊ ၅)
၅။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (Rakhine Nationalities Development Party) (၉၊ ၇)
၆။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ (National Democratic Force) (၈၊ ၄)
၇။ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ (All Mon Region Democracy Party) (၃၊ ၄)
၈။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (Pa-O National Party) (၃၊ ၁)
၉။ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (Chin Progressive Party) (၂၊ ၄)
၁၀။ ဖလုံ - စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Phalon-Sawaw Democratic Party) (၂၊ ၃)
၁၁။ ချင်းအမျိုးသားပါတီ (Chin National Party) (၂၊ ၂)
၁၂။ ၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Wa Democratic Party) (၂၊ ၁)
၁၃။ တအာင်း(ပလောင်) အမျိုးသားပါတီ (Taaung (Palaung) National Party) (၁၊ ၁)
၁၄။ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (Karen People’s Party) (၁၊ ၁)
၁၅။ စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ်(Unity and Democracy Party of Kachin State) (၁၊ ၁)
၁၆။ အင်း အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (Inn National Development Party) (၁၊ ၀)
၁၇။ ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (Karen State Democracy and Development Party) (၀၊ ၁)
၁၈။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) Democratic Party (Myanmar) (
၁၉။ တစ်သီးပုဂ္ဂလ (၁၊ ၁)
၂၀။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (National League for Democracy) (၃၄၊ ၃)
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလီအကြမ်းဖက်ရန်မှ ကာကွယ်ဖို့ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်အား ဝိုင်းဝန်းတောင်းဆိုကြပါစို့ . All Rights Reserved